အမျိုးသား တားဆေးပေါ်တော့မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အမျိုးသား တားဆေးပေါ်တော့မည်
Posted by Wai Phyoe on Jun 13, 2012 in Copy/Paste, Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary, Myanma News, News, Other - Non Channelized, Photography, Society & Lifestyle, Travel | 15 comments
ကျန်းမာသန်စွမ်းသော သုက်ပိုးထွက်ရှိမှုအတွက် အဓိကကျသည့် မျိုးဗီဇကို စကော့တလန်မှ ပညာရှင်များက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် အမျိုးသားများ သောက်သုံးနိုင်သည့် ပဋိသန္ဓေတားဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် မျှော်လင့်လာနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
သုက်ပိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် နောက်ဆုံးအဆင့်များအတွက် အရေးပါသော Katanal1 အမည်ရ မျိုးဗီဇကို ကြွက်များတွင် လေ့လာရာ၌ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Katanal1 မျိုးဗီဇကို တားဆီးနိုင်သော ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဆိုလျှင် အမျိုးသားက ယင်းဆေးကိုသောက်ရုံဖြင့် ပဋိသန္ဓေ တားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အထိ အမျိုးသားဘက်က ပဋိသန္ဓေတားရန်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းနှင့် သားကြောဖြတ်ခြင်း၊ ထုံးခြင်းကိုသာ ပြုလုပ်၍ရသေးသည်။
အီဒင်ဘာ့ဂ်တက္ကသိုလ် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဌာနမှ သုတေသနပညာရှင်များက အမျိုးသားများ မျိုးမအောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သုတေသန ပြုလုပ်စဉ် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကြွက်များတွင် မျိုးဗီဇကို ကြုံရာကျပန်းပြင်ပစ်ကာ မည်သည့်မျိုး ဗီဇချို့ယွင်းလျှင် မျိုးမအောင်ဖြစ်တတ်သနည်းဆိုခြင်းကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ သုက်ပိုးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသည့် ပရိုတိန်းတစ်မျိုးပါဝင်သော Katanal1 မျိုးဗီဇကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး ယင်းပရိုတိန်း မရှိပါက သုက်ပိုးသည် အပြည့်အဝဖြစ် တည်မလာဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ကယင်းတို့ကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
ပာင့် ပာင့် သောက်ရမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ
ယင်းဖြစ်စဉ်ကို လူသားများတွင်လည်း သုံးနိုင်ပါက လုံးဝ မျိုးမအောင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ သုက်ပိုးကို မဖွံ့ဖြိုးစေလိုသည့် အချိန်တွင်သာ မဖွံ့ဖြိုးစေရန် ဟန့်တားနိုင်မည့် တစ်နည်းအားဖြင့် မျိုးမအောင်စေရန် တားလိုသည့် အချိန်တွင် တားနိုင်မည့် အနေအထားမျိုး ဖန်တီးလာနိုင်ရန် မျှော်လင့်ချက် ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆေးထုတ်လုပ်ရေးမှာ ခက်ခဲဦးမည်ဖြစ်သော်လည်း လမ်းစတွေ့ထားပြီဖြစ်သောကြောင့် မကြာနိုင်တော့ကြောင်းလည်း လီစမစ်က သုံးသပ်သည်။
ဒီဆေးသာ ထွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ ၊ ကလေးမယူချင်သေးတဲ့ လက်ထပ်ပြီးကာစ အိမ်ထောင်ရှင်တွေ အတွက် သတင်းကောင်းပါဘဲ ။ အခုလက်ရှိ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ တားဆေးများဟာ အနဲနဲ ့အများဆိုသလို side effect ရှိနေကြတာကလား ။ မတူညီတဲ့ အတွေးတစ်ခုနဲ ့ထပ်မန် ့ရရင် ၊ အဲ့ဆေးသောက်ပြီး အပြင်က ကစ်ပင်းတွေနဲ ့ပလိန်းကိတ်စားကြမယ့် ဘောစိကိုကိုများကတော့ လက်ခမောင်း ထခတ်ချင်စရာပါ။
မှန်ပေသည် မောင်ပေ………..သေချာတာတစ်ခုကတော့ မိန်းမတွေသက်သာသွားပြီ
ဟဲ့…..ဟဲ့………. ဘယ်ကသာသက်သာသွားရမှာတုန်း………..ပို ပြီး တော့…………..ဟီးးးးးးးး
ခုမှပဲ မျှတသွားတော့တယ် :-)
အဟီးပျော်ချရာကြီး တာဝန်ယူပါတို့ ဘာတို့ညာတို့ ဘယ်နှလရှိနေပြီတို့ ဟိုဟာကဟဝှာမဖြစ်သေးဘူးတို့
ဒါပေမယ့်တာဝန်မယူရဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် က မိသားစုနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပါ မဟာပူရိသ ယောက်ျားအပေါင်းတို့အတွက်ပျော်တာပါ ဂျလန်းပေတော့
သများတို့ အချော်ဒကောက်တွေရော တားဆေးသောက်ရမလား ချင့်……..
ဒါဆိုရင် အိမ်က လူ ကို အသိမပေးမှ ဖြစ်မယ် .. နို့မဟုတ်ရင် .. ဇာတ်လမ်းရှုပ်စရာ မရှိတော့ဘူး ဆိုပြီး အဲဒီဆေး လက်ကိုင်သုံးသွားရင် နေရင်ထိုင်ရင်း ရာထူးတိုးမယ့် အဖြစ် ရောက်တော့မှာပဲ
ဟို က ဟာ ကို တားရင် ၁ဥပဲ တားရမှာ..
ဒါက သန်းနဲ့ချီရင်းရမှာ ….
ကိုယ့်ဆြာတွေ မထိတ်သာ မလန့်သာ ဖြစ်အောင် ..
ဆေးက အောင်မြင်ရင် ထား
မအောင်မြင်ရင်လည်း …ထားလိုက်ဦး … မွေးယုံ …
အဲ့… တဝက်တပျက်ဖြစ်လို့ ..ဒေါင်းလေးတွေ မွေးလာရင်
ဘယ်သူ့ အလျော်တောင်းရမှာ တုန်းဟင်င်င်င်င်င်
စိုးတယ် စိုးမိတယ်.. စိုးရိမ်မိတော့တယ်..
တကယ်တော့ အဲ့ဆေးက သိပ်ပြီး ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မယ်လို့
မထင်ပါဘူး… တော်ကြာ ယောက်ျား သုတ်ပိုးမထိန်းနိုင်ပဲ
ဟော်မုန်းဓါတ်ပျက်သွားမှ လိုင်းတွေ ပူးကုန်ဦးမယ်…
ကိုရင်က ဓါတ်သမား.. ဓါတ်သမား… ဓါတ်ပျက်ခံလို့မရဘူး..။
သဘာဝအတိုင်း ဓါတ်ချုပ်ခံလိုက်တာပဲကောင်းပါဒယ်… အဟီးးး
အထက်က ပြောသွားသော အဝှာပိုး ထိန်းသိမ်းရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နှစ်ဦး၏ အဆိုကို ထောက်ခံပါကြောင်း…